Etu esi mekọrịta 2 Kalenda Google | Martech Zone
Etu esi mekọrịta 2 Kalenda Google
Wednesday, June 10, 2020 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Douglas Karr
Na nnweta nke m gị n'ụlọnga na-arụ ọrụ ugbu a dị ka a na onye òtù ọlụlụ na ọhụrụ m Onye ahịa ahịaM nwere nsogbu ebe m na-agba ọsọ abụọ G Suite akaụntụ ma nwezie kalenda 2 iji jikwaa. Akaụntụ ụlọ ọrụ ochie m ka na-arụ ọrụ iji maka mbipụta m na ikwu okwu - akaụntụ ọhụrụ ahụ bụ maka Highbridge.
Mgbe m nwere ike ịkekọrịta ma hụ kalenda nke ọzọ na nke ọzọ, achọrọ m igosipụta oge site na kalịnda ndị ọzọ na nke ọ bụla na-arụsi ọrụ ike. Achọrọ m ụdị ngwọta ọ bụla… naanị otu ụzọ m nwere ike isi mee ya bụ ịkpọta akaụntụ nke ọzọ na mmemme ọ bụla, nke jọgburu onwe ya ma nwee ike ibute ọgba aghara na ndị ahịa.
Ọbụna nke kachasị mkpa bụ na enwere m usoro ịhazi oge maka kalenda nke ọ bụla. Nke a emeela ka nzukọ ọtụtụ nzukọ hazie na esemokwu nke m ga-emegharị. Ọ na-ewe gị iwe. Achọrọ m nke ahụ G Suite nyere ikike ịdenye aha na kalenda ọzọ ma nwee ya dị ka ndabere ọrụ n'aka na kalenda nke mbụ.
Nchọpụta m rụpụtara ihe ngwọta dị egwu, SyncThemCalendars. Site na ikpo okwu, enwere m ike itinye mmekọrịta abụọ… site na akaụntụ ọ bụla na nke ọzọ.
Gini mere I ji me Kalenda gi mekọrịta?
Enwere ike ịnwe ọtụtụ ojiji maka arụmọrụ a. Nwere ike igbochi oge na kalenda ọrụ gị dabere na kalenda gị / nkeonwe gị. Inwere ike i toomi ihe niile sitere na kalenda otu na nke gị. Ma ọ bụ ikekwe ị bụ onye na-akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa dị iche iche ma chọọ n'ụzọ ụfọdụ ịhazi ọrụ gị.
Akaụntụ ahụ na-enye gị ohere ịdebanye aha na kalenda mbụ wee mekọrịta ruo kalenda 5. Ọbụna nke ka mma, ịnwere ike ịhazi nkọwa kalenda, gụnyere:
Ncheta - ndabere bu kpochapụrụ ebe nke a ga - eme ka kalenda gị zitere gị ihe ncheta.
Agba - kachasị aka, enwere m ike itinye ntinye kalenda ọ bụla nwere agba dị iche.
Ọ bụ nnukwu ngwa weebụ yana ọnụ ala maka nkwekọrịta kwa afọ. Ekwenyesiri m ike na ọ ga-azọpụta m karịa ka ọ na-efu n'ikpeazụ.
Ngọnarị: Abụ m mmekọ nke SyncThemCalendars
Tags: G Suitekalenda googlegsuiteotúarụpụtaghịusoro ihe omumemmekọrịtamekọrịtasyncthemcalendars
Ọkwa Math SEO WordPress Plugin bụ zingtụnanya!